Software များ | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
Windows ကိုယာဉ်မောင်းဒေါင်းလုပ် Generic ဗားရှင်းအဘို့အ Atheros Qualcomm WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကို Module
ဧပြီလ 25, 2017 မောင်းသူ 0
ဒါကယာဉ်မောင်း Atheros များအတွက်ယေဘုယျဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် / Qualcomm ကြိုးမဲ့ module တစ်ခု, သူတို့ဟာ AT1xxx ၏မော်ဒယ်အများစုထောကျပံ့နိုငျ / AR2xxx / AR5xxx / AR9xxx […]
Intel က 3165 3165NGW AC အ WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကို Windows ကယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ်
ဧပြီလ 23, 2016 admin ရဲ့ 0
Intel 3165 မောင်းသူ >>> အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. ယာဉ်မောင်းသူသာနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူIntel® PROSet / ကြိုးမဲ့ဆော့ဝဲများအတွက် download, ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: 3165 Series Version: ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်: Intel® PROSet/Wireless WiFi Software is […]
Intel က 3160 3160HMW 3160NGW AC အ WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကို Windows ကယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ်
Intel 3160 မောင်းသူ >>> အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. ယာဉ်မောင်းသူသာနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူIntel® PROSet / ကြိုးမဲ့ဆော့ဝဲများအတွက် download, ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: 3160 Series Version: ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်: Intel® PROSet/Wireless WiFi Software is […]
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Motorola DROID RAZR M XT907 mobile […]
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Motorola MB526 mobile phone（black）.The event […]
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Motorola RAZR2 V9 mobile phone（black or wine […]
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, ကုမ္ပဏီ BlackBerry ကို၏စျေးနှုန်းများကိုဖြတ် 9630 မိုဘိုင်းဖုန်းမှ (အနက်ရောင်). […]
64-နည်းနည်းက Windows စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ဥပဒေရေးရာအနက် Technology_Internet device ကိုမော်ဒယ် ပရိုဆက်ဆာ Software များ OS ကို-STORE စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Intel က နည်းပညာ processor ​​ကို Samsung က HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Nokia က မိုဘိုင်းဖုန်း စီပီယူ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် HD Graphics
processor ​​ကို ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု OS ကို-STORE စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် Technology_Internet စီပီယူ Intel က HD Graphics Intel က Server ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စမတ်ဖုန်းများ Samsung ရဲ့ Galaxy စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Samsung က Nokia က မိုဘိုင်းဖုန်း Sony Ericsson က device ကိုမော်ဒယ် 64-နည်းနည်းက Windows နည်းပညာ ပရိုဆက်ဆာ HTC က Software များ Qualcomm မှ